Soria တွင်ဘာတွေလုပ်ရမည်၊ သဘာဝ၊ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | စပိန်မြို့ကြီးများ, လမ်းပြ
Soria မှာဘာလုပ်ရမလဲ ဒီမေးခွန်းကို numerous ည့်သည်တော်များများမှများစွာသောမေးခွန်းများမေးခဲ့သည် Castile နှင့် Leon။ အကြောင်းကတော့အဲဒီမြို့ဟာစပိန်နိုင်ငံမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးလူတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအသေးက the ည့်သည်ပေးထားပါတယ် ဘဏ္treာများစွာရှိသည် သဘာဝနှင့်အနုပညာနှစ်ခုလုံး၊ gastronomy.
Mirónနှင့် Del Castillo တို့၏တောင်တန်းများကြားထူးခြားသည့်အခြေအနေနှင့်အတူရေချိုးခြင်း ဒိုရိုမြစ်, Soria XNUMX ရာစုအဆုံးမှာမြို့အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ပန်းချီကား Valonsadero တောင်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသည့်theရိယာသည်သံခေတ်အတွင်းနေထိုင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုမမေ့ဘဲ Soria နဲ့ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှာသူရဲကောင်းဆန်ဆန်မြို့ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ် Numancia။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်, Castilian မြို့သင့်ကိုကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ သင်လည်း Soria တွင်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုသင်စဉ်းစားနေပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 Soria မှာဘာကြည့်ရမလည်း
1.1 San Pedro ၏ Co- ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
1.5 အဆိုပါမြစ်ချောင်းများနှင့် Salcedo ၏နန်းတော်
1.6 Numantino ပြတိုက်
2 Soria တွင်လုပ်ရန်အခြားအရာ
3 Soria မှာဘာစားရမလဲ
အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း Soria တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောheritageရာမအမွေအနှစ်များနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောတောင်တန်းဒေသများရှိသည်။ ၎င်းသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၆၃ မီတာအမြင့်တွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ Soria သို့ငါတို့လည်ပတ်မှုစတင်သွားနေကြသည်။
San Pedro ၏ Co- ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၎င်းသည် Soria ရှိအဓိကဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးဘုရားကျောင်း၏အကြွင်းအကျန်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အပြင်ဘက်တွင်တော့အလွန်သမ္မာသတိရှိကြသည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်အတွင်း၌ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများစွာနှင့်လှပသောဥယျာဉ်တစ်ခုရှိသည် Romanesque cloister လက်ရှိဗိမာနျတျောမှယခင်။ အဆောက်အ ဦး သည်ဤဗိသုကာပုံစံကို Gothic နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး Berlanga de Duero Collegiate Church ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီတည်ဆောက်ထားသည်။
Soria တွင်သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာမြို့အနှံ့အပြားပျံ့နှံ့နေသောစစ်မှန်သောဘုရားကျောင်းများသို့သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိသုကာရတနာ။ သူတို့အထဲမှထွက်မတ်တပ်ရပ် San Juan က de Rabanera ၏ဘုရားကျောင်း, Romanesque စတိုင်နှင့် XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် Espino ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း၎င်း၏ plateresque ဒြပ်စင်နှင့်အတူ Santo Domingo ရှိတစ်ခုကမ္ဘာပေါ်မှာသူမလိုပဲငါးယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။
သို့သော် Soria သည်၎င်း၏ရသေ့များနှင့်ကျော်ကြားသည်။ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Myron ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်, Romanesque စတိုင်အတွက်အဟောင်းတစ် ဦး ၏ထိပ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့လှပသော Baroque ဗိမာနျတျော။
ထိုအတူတူပင်နိုင်ပါသည် စန်း Saturio ၏ရသေ့ ၎င်းသည်တောင်စောင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့်အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်းကိုဟန်ချက်ညီညီပုံဖော်ထားသည်။ ဒဏ္legာရီအရ Visigoth ကျောက်ဆူးသည်ဂူတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် San Saturioယနေ့ Soria ၏နာယကနှင့် Baroque စတိုင်၌တည်ရှိ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီရသေ့အံ့သြဖွယ်တည်ရှိသည် ရဲတိုက်ပန်းခြံဤဆောက်လုပ်ရေး၏အကြွင်းအကျန်များကိုတွေ့ရှိရပြီးသင့်တွင် Duero မြစ်ကြောင်း၏အံ့မခန်းဖွယ်ရှုခင်းများကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။
သင် Soria တွင်နောက်ထပ်လုပ်ရန်မှာ Plaza Mayor သို့လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ် ဦး ရဲ့အဆုံးမှာတည်ရှိသည် ကော်လာဒိုလမ်း, သင်သည်များစွာသောစျေးဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်တွေ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါစတုရန်းသူ့ဟာသူအတွက်ရတနာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူလည်းခမ်းနားအဆောက်အ ဦး များအိမ်ကိုလည်း။ ဥပမာအားဖြင့်, အဆိုပါဘုံ၏အိမ်, XNUMX ရာစုအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနှင့်လက်ရှိသမိုင်းဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်၏ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် ပရိတ်သတ်၏နန်းတော်များနှင့်နွယ်ဆယ့်နှစ်ပါး။ နောက်ဆုံးတော့မင်းကရင်ပြင်ကိုရှာမယ် Doña Urraca မျှော်စင်၁၅ ရာစုမှ; က ခြင်္သေ့စမ်းရေ၁၈ ရာစုမှစ Santa María la Mayor ၏ဘုရားကျောင်းလှပသော Plateresque altarpiece အတူ။
၎င်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အများဆုံးကိုယ်စားပြုသောဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည် မြို့ပြခေတ်ပြိုင်စတိုင် အဆိုပါ Castilian မြို့၌တည်၏။ ပြင်ပတွင်၎င်းကိုအလောင်းနှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်ခုမှာကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးကြီးမားသောလသာဆောင်များရှိသည်။ အခြားတစ်ခုမှာ ပိုမို၍ အသေးစိတ်ကျစွာဖော်ပြထားသည်မှာ Tuscan ကော်လံတွင်တစ်ဆယ့်နှစ်ရီလေးထောင့်လေးထောင့်စီမုတ်များရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ ၎င်း၏ခမ်းနား porticoed ဝင်း နှစ်ထပ်။
အဆိုပါမြစ်ချောင်းများနှင့် Salcedo ၏နန်းတော်
၎င်းသည်ယခင်မိသားစုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောမိသားစုအတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၁၆ ရာစုအစောပိုင်း မှစ၍ အနည်းငယ်သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်သည်။ သူကိုမီးမောင်းထိုးပြ ခေတ်ဆန်းတံခါး plateresque ဒြပ်စင်နှင့်အတူအလှဆင်။ ၎င်းသည် Plaza de San Clemente တွင်တည်ရှိသည် အဆိုပါ Inquisition ၏အိမ်၎င်း၏သုံးပေါများသောအတုလသာဆောင်နှင့်အတူ။
သင် Soria တွင်လုပ်ရမည့်အရာများထဲမှဤပြတိုက်သို့အလည်အပတ်သွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူမြို့ပြင်ဆင်ခြေဖုံးမှာသူရှိနေတယ် Numancia၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိစွာနှင့်သူရဲကောင်းဆန်စွာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့သည့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုအတွက်သမိုင်းတွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒါပါ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက် သောအရာဝတ္ထုကိုပိုင်ဆိုင်သည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဒါခေါ်အဖြစ် solutrean အပိုင်းအစ နှင့် Neolithic။ သို့သော်ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းသည်ရှေးခေတ် Numantia တွင်တွေ့ရှိရသောအရာဝတ္ထုအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သူတို့တွင်ပါဝင်သည်သူများဖြစ်ကြသည် Numantine Celtiberian ကြွေထည်ရောမခေတ်မတိုင်မီကသူရဲကောင်းများနေထိုင်ကြသည့်မျက်မှန်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ဘူးများသို့မဟုတ်စည်များ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းသင်သည် Soria the တွင်တွေ့ရလိမ့်မည် San Juan de Duero အလယ်ခေတ်ပြတိုက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်သည့် Romanesque ဗိသုကာလက်ရာများ ဂျေရုဆလင်၏စိန့်ဂျွန်၏ Hospitallers ၏အမိန့် နှင့်အပျက်အယွင်းအတွက်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ကသွားရောက်ခြင်းက၎င်း၏ခမ်းနားများအတွက်အမှန်တကယ်အထင်ကြီးစရာပါပဲ။
အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကိုမြင်ရသည့်အပြင် Soria တွင်သင်သည်အခြားအရာများစွာကိုလုပ်နိုင်သည် ဥပမာဖုန်းခေါ်ဆိုပါ Machadian လမ်းကြောင်းကြီးစွာသောကဗျာဆရာနှင့်သက်ဆိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှတဆင့်ပြေးသော။ သင်သိသည့်အတိုင်းသူသည် Soria တွင်နေထိုင်ပြီးလက်ထပ်ခဲ့သည် Leonor လက်ဝဲနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အဘယ်သူသေလိမ့်မည်။ ဒီလမ်းကြောင်းကမင်းဆီကိုသွားလိမ့်မယ် Santa María la Mayor ၏ဘုရားကျောင်းသူတို့လက်ထပ်ဘယ်မှာ; ရန် Espino ဘုရားကျောင်းဘယ်မှာလဲ ခြောက်သွေ့ elm အရာသူသည်မိမိအကဗျာတစ်ပုဒ်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်မှာမသေ အင်စတီကျု သူကပြင်သစ်ဘာသာကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးသူ့မှာစာသင်နေတုန်းပဲ။
Soria ရှိ Tapas များနှင့်စားသောက်နိုင်သောခမ်းနားသောအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုလည်းသင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည် စန်း Clemente စတုရန်းလူကြိုက်များသောအဖြစ်လူသိများ "ပြွန်"နှင့်၎င်းသည်အလွန်ထူးကဲသောအစားအစာကိုခံစားရန်စုရီရာလူမျိုးများစုဝေးသည့်နေရာဖြစ်သည်။
အထက်ပါသည် Soria ၏ gastronomy အကြောင်းကိုသင့်အားပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ဆောင်သည်။ တူညီသော၏အထူးထုတ်ကုန်များမှာ အနက်ရောင် truffleအဆိုပါ ဝက်အူချောင်း ကဲ့သို့ ချိုသောသွေးဝက်အူချောင်းအဆိုပါ cordero နှင့် ဒိန်ခဲ.
မြို့ပြ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများကိုသင်အတိအကျကြိုးစားရမည် သိုးသငယ် Shanks, ဒီသတ္တဝါ၏လတ်ဆတ်သောအသွေးသည်ရာသီပေါ်နှင့်ကင်အပေါ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ braised ဟင်းလျာများအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ပြည်နယ်ရှိပါတယ် ဇော်ပိုင် အာမခံအမှတ်အသားနှင့်အတူ။ ၎င်းတို့သည် Soria the တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်သည် နွားထီးထဲမှာစွပ်ပြုတ်အဆိုပါ ကော့၏ကြက်သွန်ဖြူ muleteer, Las ဆေးလိပ်ရောက်ရေချိုငါး, Las ချဉ်အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် အစအန။ အဆုံးစွန်သောစပိန်၏အခြားဒေသများနှင့်အတူမျှဝေတစ်ပန်းကန်ဖြစ်ကြသည် Salamanca, Extremadura သို့မဟုတ် Murcia ။
ပိုပြီးပုံမှန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် သရက်, ဝက်ရဲ့ trotters နှင့် trewew တစ်စွပ်ပြုတ်။ ထို့အပြင်မုန့်ချိုချိုနှင့် ပတ်သက်၍ စမ်းသပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည် အဆိုပါဘူးသီးနှင့်Almazán၏သည်းခံခြင်းအဆိုပါ Mantecados y တကယအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် အပေါ်ယံလွှာပိုင်, သူတို့အကြားမုန့်နှင့်မုန့်နှင့်အတူ puff pastry အများအပြားအလွှာ၏ရေးစပ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ဤအရာများကို Soria တွင်ပြုလုပ်ရန်အချို့သောအရာများဖြစ်သည်။ သင်မြို့ကိုလည်ပတ်လျှင်သင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည် ခမ်းနားအနုပညာအမွေအနှစ်, အမြင်များ လှပသော Castilian ရှုခင်းများ နှင့် အရသာအစာအိမ်။ မင်းသူနဲ့တွေ့ချင်တာလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » Soria မှာဘာလုပ်ရမလဲ